Video: Hip Hop Singer Ye Lay's Respone On Rumor of His Dead | Myanmar Celebrity Gossip & News
Video: Hip Hop Singer Ye Lay's Respone On Rumor of His Dead
အဆိုတော် ရဲလေး ဓားထိုးခံရလို့ သေပြီ ဆိုတဲ့ ကောလဟာလ သတင်းမမှန်ကန် ပါကြောင်း ရဲလေး ကိုယ်တိုင်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်Video on Youtube!!!
Rumors were circulating around Myanmar Audiences that Myanmar Popular Hip Hop Singer Ye Lay was dead because of fighting between Singer Group and Phoe La Pyay (Myanmar Military Junta's Grand-Son) Group. According to the Rumor, Singer Rzarni and Sai Sai were also in the hospital. Finally, Singer Ye Lay made his own explanation video on Rumor and uploaded on Facebook.
123456March 11, 2011 at 10:28 PMမင်းပြောတဲ့ အထဲ မှာ ဂေါင်းသုံး ပြီးယုံ ဆိုတဲ့ စကား က အကောင်းဆုံးဘဲReplyDeleteTAUNGPAWTARMarch 12, 2011 at 12:40 AMအေးဟုတ်တယ် 2012ေ၇ာက်နေပြီခေါင်းသုံးပါတယ်ဆိုတဲ့စကား က မိုက်တယ်..၇ဲလေး.ဆက်လျှောက်ဆက်လျှောက်ReplyDeletemahtaikMarch 12, 2011 at 1:48 AMဲအစ်ကို မသေတဲ့အတွက်အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်ReplyDeleteမေသူMarch 12, 2011 at 2:28 AMတော်သေးတာပေါ့ အခုလိုမြင်ရမှစိတ်အေးတော့တယ်။ထင်တယ် ထင်တယ် ရဲလေးကပရိတ်သတ်အတွက် အသက်အမြဲရှင်နေမယ်ဆိုတာ။ စကားမစပ် နည်းနည်းပိန်သွားတယ်နော်။ReplyDeletechitthumgMarch 12, 2011 at 4:33 AMရဲလေးကွ....ReplyDeletejohnkolatMarch 12, 2011 at 5:21 AMမြန်မာပြည်ကကောလဟာလအယုံလွယ်တဲ့အကျင့်တွေမပျောက်သေးတဲ့အတွက်ရင်လေးမိပါတယ်။ရဲလေးပြောတာခေါင်းသုံးလို့ပြောတာပါဂေါင်းမဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလဲ ၂၀၁၂ ရုပ်ရှင်ကားကြည့်ပြီးအရမ်းသေးငယ်တဲ့အမြင်တွေပေါ်ထွက်လာပါသေးတယ်၊ဒီလိုမျိုးတွေးခေါ်ပိုင်ရှင်တွေကလူ့အခွင့်အရေး(democracy)အပြည့်အဝတောင်းနေတာ ရီစရာဖြစ်နေပါတယ်၊မဖြစ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။မဆီမဆိုင်ပဲပြောတာမဟုတ်ပါ ဆီဆိုင်လိုပြောတာပါ၊မြန်မာတပြည်လုံး လေးလေးနက်နက်ဖြစ်စေချင်တာပါကျွန်နော်တို့တွေက ပြည်ပမှာဆိုတော့ မြန်မာပြည်ကသူတွေကိုလဲတိုင်းတပါးက ပြည့်စုံနေတဲ့သူတွေလိုမြင်ချင်ကြားချင်ပါတယ်ဗျာReplyDeletemayMarch 12, 2011 at 6:03 AMj0hnkolat..ပြောတာဟုတ်တယ်..လူတွေအားလုံးကို... တွေခေါ်မြင့်မာစေချင်တယ်..ပြည်သူပြည်သားတွေကို..ပြည့်စုံတဲံ့ဘ၀နဲ့နေတာကိုဘဲမြင်ချင်တယ်...တို့တိုင်းပြည်ကြီး လူနေမူ့အဆင့်မြင့်ပြီး..ဘယ်တော့များမှာပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါမလဲ့နော်...ReplyDeleteLinMarch 12, 2011 at 8:23 AMYe Lay,Tun Tun,Moe Moe,Nay Toe, Kyaw Kyaw Bo, U Myo & Eternal Rose....Wishing to be Eternity ...ReplyDeleteWin NaingMarch 12, 2011 at 8:43 AMရဲလေး တော်တယ် အားလုံး ခေါင်းသုံးကြတဲ့ ငါ့ညီ တော်တတယ်ကွာReplyDeleteရဲလေးMarch 12, 2011 at 7:08 PMတော်သေးတာပေါ့ဗျာ ကို၇ဲလေး မသေလို့ ကျွန်တော်လဲကို၇ဲလေးကို သဘောကျအားကျလို့ ကို၇ဲလေးနာမည်ကိုသုံးပြီ့း WWW.APYTZ.NET မှာ DJ YELAY နာမည်နဲ့ သုံးပါတယ် ကျွန်တော်က အွန်လိုင်းေ၇ဒီယိုလွှင့်တဲ့သူတယောက်ပါ ။ခုလို ပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်၇တော့ အ၇မ်းဝမ်းသာပြီး ပျော်၇ွှင် ၇ပါတော့တယ် အား၇င် ကျွန်တေတ်ာတို့ ၇ဲ့ အဖြူေ၇ာင်သံစဉ်ဆိုက်ကြီးမှာ လာေ၇ာက် အားဖြည့် အဖွဲ့ ဝင်ပေးပါဦး အကို ၇ဲလေး လေးစားစွာဖြင့် ဒီဂျေ(၇ဲလေး) yeelsy@apytz.netReplyDeleteRapMarch 12, 2011 at 9:22 PMကိုရဲလေး ဘ၀မှာဆက်ပြီးအောင်မြင်ပါစေ အမြဲအားပေးနေမယ့် ဘားအံကညီမလေးReplyDeleteinportantMarch 12, 2011 at 10:20 PMအင်းတော်သေးတာပေါ့...ပထမတော့မယုံဘူးဖြစ်နေတယ်သေတယ်ဆိုတာကို....အခုတော့၇ှင်းသွားပြီ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...ဆက်လပ်အားပေးနေမှာပါ....ReplyDeleteyukoMarch 13, 2011 at 3:21 AMမျက်စိ ဘယ်ရောက်နေတာလဲ ဂေါင်းသုံး ပြီးမေးတာပါ.............မဲနေတယ်နော်...ReplyDeletezawwinMarch 13, 2011 at 6:05 AMရဲလေး မင်းမသေဘူး ဆိုလို အကိုပတိုင်ထက်အလွန်ဝမ်းသာတယ် ကိုယ်ကအသက်၄၀ရှိနေပေမဲ့မင်းရဲ့အနုပညာကိုကြိုက်တယ် မင်ကိုကိုယ်ညီလိုချစ်တယ် မင်သတင်းကိုကြားတော့ကိုယ်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်မင်ရင်သတင်းတွေကိုလိုက်ရှာပြီးဖတ်တယ်မဟုတ်လောက်ဘူးဆိုတာလဲသိတယ် မင်လိုလူမိူးဒီလိုမဖြစ်လောက်ဘူး နောက်ပြီးကြားတဲ့သတင်းကလဲ အဆိုတော်တွေစုံနေတော့လုံဝမဖြစ်နိုင်ဘူလို့တော့ထင်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဒီလိုစုံဖို့ကခက်တယ်လေ ကိုယ်တွေးမိတာကတော့ နိုင်ငံရေးလှဲ့ကွက်လို့ထင်တယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်ခုလိုမဖြစ်တာ ကိုယ်တော့အတိုင်ထက်အလွန်ဝမ်းသာပါတယ် မင်းလိုအနုပညာရှင်တစ်ယောက်မဆုံရုံးတာ ကိုယ်တို့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် အရမ်းလိုအပ်ပါတယ် ရဲလေး ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေ တိုးတက်ပါစေ မိဘကိုလုပ်ကျွေးနိုင်သောသားကောင်ရတနာလေး ထာဝရအောင်မြင်ပါစေ ကိုယ်ညီReplyDeletephone pyaeMarch 14, 2011 at 1:00 AMခေါင်းသုံးဆိုတာ ဘယ်သူတွေကိုပြောတာလဲ ..... ဟင် ....ReplyDeleteroseMarch 14, 2011 at 5:29 PMyes , mg lay [ ye lay] TALK very Great, I so Happy Now, and then Ye Lay , Kyaw Kyaw Bo , Nay Toe , Tun Tun , U Myo and Pu Sone , May Kabar , Moe Yu San , Moe Moe , We are Proud to you guys , All way ft All The Time AUNG MYIN PAR SAY.......GOOD LUCK.......ReplyDeleteLeiMarch 14, 2011 at 9:22 PMOOPS ! I DIDN'T EVEN HEARD A SHIT BOUT DAT RUMOURS ! LOLX..ANYWAY...GLAD TO HEAR U R STILL ALIVE... LMAO ~ xD..hee..xDReplyDeletesomphonMarch 15, 2011 at 12:45 AMရဲလေးက နည်းနည်းများပိန်သွားလားလို့...တနေ့ တခါလောက်ပဲကောင်းတယ်....များသွားရင်လည်း ထိတယ်ဟ....ReplyDeleteJamesMarch 15, 2011 at 7:38 AMသတင်းတစ်ခုကို ခေါင်းသုံးပြီး ယုံဖို.ဆိုတာ -၁) သတင်းကို ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းဋ္ဌာနက သိက္ခာရှိပြီး ဘက်မလိုက်ဘဲ ပွင့်လင်းရဲဝံ့တဲ့ သတင်းဋ္ဌာနလား??...(မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိပါသလား??)၂) အချိန်နဲ.တပြေးညီ ဖြစ်တဲ့သတင်းလား..၃) သတင်းရေးရာမှာ အချက်အလက်၊ သက်သေခံ စုံရဲ.လား..(၁-အချက်ပေါ်မူတည်သည်။)မြန်မာပြည်ကလူတွေက ခေါင်းမသုံးတာမဟုတ်ပါဘူး..။ အဲလောက်မညံ့ပါဘူး။ ခေါင်းသုံးဖို.အခွင့်အရေးမရကြတာ..။ အခြေအနေတွေက သူတို.ကို ကောလဟာလကို ယုံအောင်တွန်းပို.နေကြတယ်။ သိက္ခာရှိရှိ တာဝန်ယူပြီး သတင်းအချက်အလက် ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြနိုင်တဲ့ သတင်းဋ္ဌာန မရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး ကောလဟာလပဲ ယုံရမလိုဖြစ်နေပြီး..။ ကာယကံရှင်တွေလည်း ဖြေရှင်းရတာနဲ.အလုပ်ရှုပ်တယ်..။ ရှိသမျှသတင်းဋ္ဌာနတွေကလည်း ဆင်ဆာဖြတ်ခံရပြီး တံတားဖွင့်ပွဲ၊ လမ်းဖွင့်ပွဲ၊ ဈေးဖွင့်ပွဲ တွေဘဲ ဖော်ပြရတယ်..။ ဈေးဖျက်ရတာ၊ လမ်းချဲ.ဖို.မြေသိမ်းတာ ဖော်ပြလို.ရမယ်မထင်ပါဘူး..။အဲတော့ လူတွေမှာ ဘယ်ကသတင်းကို ခေါင်းသုံးပြီး ယုံရမှာလဲ..။ReplyDeleteArpuMarch 15, 2011 at 10:47 AMခေါင်းသုံးတော့သုံးပေါ့ ဒါပေမဲ့ စဉ်းစားပြီးသုံးပေါ့ReplyDeletemimiMarch 16, 2011 at 10:13 PMKo ye' lay မသေတဲ့အတွက်အရမ်းဝမ်းသာပါတယReplyDeleteemo.March 21, 2011 at 10:47 AMငပေါ ဂေါင်သုံးလို့ပြောစရာလားမင်းက...သောက်ချိုးကိုမပြေဘူးReplyDeletewaiApril 21, 2011 at 5:36 AMအပေါ်က ခွါးတစ်ကောင် ခေါင်းသုံးလို မပြောလို ဘယ်လိုပြောရမလည်းဒီနေရာမှာ မို့လို့မပြောချင်ဘူး မင်း မြန်မာလူမျိုး မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော် ကိုရဲလေး မသေဘူးဆိုတာကို သိလိုက်တော့ အရမ်းပျှော်မိပါတယ်သီချင်းတွေ အများကြီး ရေးနိုင်ပါစေ အကိုရာအားပေးတယ် ပြောချင်တာတွေက အများကြီး အပေါ်က ငမိုက်သား တစ်ယောက်ရေးထားတဲ့ စာကို ဖိတ်ပြီးတော့ တော်တော်လေးကို တော်ပြီ တော်ပြီ (အပေါ်က) ခွါး ငမိုက်သား ဒီအကောင့်ကို လာခဲ့ မင်း WAIYANMINNAING@GMAIL.COM ခွါး ဒီနေစာကို ဖတ်မိပါစေ♥အကိုရဲလေး♥ သီချင်းတွေများများရေး ပြီးတော့ လူငယ်တွေ အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေအောင်နေ အပေါ်က ခွါး ငမိုက်သားလို မဖြစ်စေနဲ့ညီလေး အာပေးနေတယ်ReplyDeletemeeJuly 5, 2011 at 11:33 PMရဲလေးသေဆုံးသည်ဆိုသည်မှာ မဟုတ်ပါ ..ကောလဟာလသာ ဖြစ်ကြောင်း သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံသွားပါသည် .. အမှန်တကယ်သေဆုံးသူမှာ ကြက်ဖသာဖြစ်ပါသည် ကြက်ဖ သည် လည်လှီး ပီး အသတ်ခံရခြင်းဖြစ်ပါသည် ... မယုံကြည်ကြပါက ကြက်ဘဲဈေးတွင်သွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည် :PReplyDeleteAdd commentLoad more...